मेलापात गरेर पैसा कमाउँथिन् समिक्षा, हजारकाे नोट देख्दा अनुभव यस्तो ! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > मेलापात गरेर पैसा कमाउँथिन् समिक्षा, हजारकाे नोट देख्दा अनुभव यस्तो ! (भिडियो हेर्नुस्)
मेलापात गरेर पैसा कमाउँथिन् समिक्षा, हजारकाे नोट देख्दा अनुभव यस्तो ! (भिडियो हेर्नुस्)
admin June 27, 2020 जीवनशैली, भिडियो, मनोरञ्जन	0
काठमाण्डौ – गायिका समिक्षा अधिकारीको दुई नयाँ गीतहरु अहिले हिट छन् । उनले गाएको ‘माया मारेर’ बोलको गीत र हालै रिलीज भएको ‘मैले बोलेको छैन ढाँटेर’ बोलको गीत अहिले हिट छन् । उनले गाएको ‘मेरी छोरी’ बोलको गीत पनि सुपरहिट बनेको थियो चलचित्र ‘नाईँ नभन्नु ल ५’को ‘बालापनको उमेर’ चर्चित गीत पनि उनले नै गाएकी हुन् ।
युट्युबमा सार्वजनिक भएको केहि दिनभित्रै ‘माया मारेर’ बोलको गीतले पचास लाख माथी भ्यूज पाएको छ भने नयाँ गीत पनि यूट्युबको ट्रेण्डिंगमा छ । यि गीतहरुका टिकटक भिडियो डेढ लाख बढी बनिसकेका छन् ।
यसैबीच आज हामीले तपाईँसामु गायिका अधिकारीको एक रमाईलो अन्तरवार्ता देखाउन गईरहेका छौँ । ठुलोपर्दा टिभिका जिवन पराजुलीले यो अन्तरवार्ता लिएका छन् जहाँ समिक्षासँगै नेपाल आईडलका विजेता बुद्द लामा र गायक कृष्ण काफ्ले पनि छन् ।
अन्तरवार्तामा गायक लामाले आफ्नो जीवन संघर्षको कुरा गरेका छन् भने अधिकारीले आफुले अनुभव रेग्मीसँग काम गर्ने चाहना राखेकी छन् । समिक्षाले आफुले मेलापात गरेर ३-४ सय रुपैयाँ कमाउने गरेको पनि कुराकानीमा बताएकी छन् ।
उपत्यका भित्रिने कयौ मानिस क्वारेन्टिनमा नबसी परीक्षण बिना नै बजार – बजार डुल्दै
मोबाइलको पासवर्ड नदिएकै कारण श्रीमानको शरिरमा पट्रोल ख’न्याएर आगो लगाएपछि…
महिना दिन नवित्दै अशोक दर्जीको घर बारे खुल्यो यति ठुलो खुलाशा… भार्इ बहिनी किन स्कूल जान छाडै, भिडियोमा हेर्नुहाेस
मेलिना रार्इकाे जस्तै आवाज भएकि झापाकि बालगायिका रचना यसरी भाइरल बन्दै सामाजिक सञ्जालमा! – भिडियो हेर्नुहाेस्
मलेसियामा १० वर्षदेखि बेपत्ता यी नेपाली युवकले इन्डोनेशियाकि युवतीसँग बिहे गरेर यस्तो बिचित्र (भडियो)